ပရိသတ်နဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ IC Show | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပရိသတ်နဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ IC Show
ပရိသတ်နဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ IC Show
Posted by နွယ်ပင် on Jun 24, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.., Entertainment, Music | 15 comments
သွားကြည့်ဖြစ်တဲ့ IC show
22 ရက်နေ့ ညနေမှာ IC show ပွဲရှိတယ်တဲ့ သူငယ်ချင်းက ဖုန်းဆက်လာတယ် နွယ်ပင်က IC ပွဲဆို အရမ်းကြိုက်ပြီး ကြည့်ချင်နေတာ ဒါပေမဲ့ လက်မှတ်ဈေးတွေက ကြီးတော့
သွားပြီးမကြည့်ဖြစ်တာ များတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ လက်မှတ်ဈေးကလဲ ဈေးသိပ်မကြိးတဲ့ အနေအထားဆိုတော့ ပွဲလုပ်မယ့် နေ့ခင်းမှာပဲ ကြည့်မယ်ဆိုပြီး အသည်းအသန် သွားဝယ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ပွဲစချိန်က ည (73း0) တဲ့ ဒါဆိုရင် အလုပ်က ပြန်မှာနဲ့ အတော်ပဲပေါ့
ညနေလဲရောက်ရော ရွာလိုက်တဲ့မိုးက ပွဲပျက်မလားတောင်ထင်ရတယ် ဒါပေမဲ့ နွယ်ပင်ပဲဟာ လက်မှတ်ဖိုးတော့ ဘယ်အရှုံးခံမလဲ သွားမယ်ဆိုပြီးရအောင်ထွက်ခဲ့တာပေါ့
မိုးရွာတာကိုအကြောင်းပြပြီး Taxi ဈေးတွေကလဲ ခေါင်ခိုက်လို့ အရင်ငှားနေကျထက် ပိုပေးပြီးငှားခဲ့ရတယ် သုဝဏရုံရှေ့လဲရောက်ရော လက်မှောင်ခိုတွေက (6000) တန်းကို (6000) (8000) တန်းကို (8000) လို့အော်နေတော့ ဟယ် လူတွေမိုးရွာလို့ မလာတောဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးစိတ်တောင် မကောင်းဖြစ်သွားသေးတယ် နောက် ရုံထလဲဝင်ရော ဘယ်ဟုတ်မလဲ များလိုက်တဲ့လူတွေ မနည်းမနောပဲ
IC ရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ တကယ့် အံမခန်းပဲ မိုးထဲလေထဲမှာတောင် ရောက်အောင်လာခဲ့တယ် ။ကိုယ်ကလဲ IC ပရိသတ်ဆိုတော့ မိုးရေထဲလဲ ရောက်အောင်လာခဲ့သလို (လက်မှတ်ဖိုးဆုံမှာလဲကြောက်တာပါတာပေါ့) ဒိလူတွေလဲ ဒိလိုပဲထင်ပါတယ် ။
IC ကတော့ သူရဲ့ ထုံးစံအတိုင်းပွဲချိန် (73း0) လို့ပြောရင် အတိအကျကိုစတာပဲ ပွဲစစချင်းမှာ လင်းလင်းက စဆိုတော့ ပိရိသတ်နဲ့ အတွဲညီညီပေါ့ နောက် ဝိုင်ဝိုင်း သူကလည်းပရိတ်သတ်တွေကို သူရဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ စီးမျောနေအောင်စွမ်းဆောင်လို့ပေါ့ ပြီးတော့ မျိုးကြီး ၊ မျိုးကြီးအလှည့်မှာတော့ ပရိတ်တွေနဲ့ တကယ့်ကို အားပါးတရ အတွဲညီညီနဲ့ပါပဲ အငဲအလှည့်ရောက်တော့လည်း သီချင်းဟောင်းရော အသစ်ရောနဲ့ ပရိသတ်ကို ဆွဲခေါ်သွားးခဲ့ပါတယ် ၊ ကိုအငဲက “အိမ် “သီချင်းကိုလဲ ပရိသတ်တွေအတွက် ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်IC ရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကိုလေးဖြူကို အော်နေကျတာပေါ့ အဲတာကြောင့်ထင်တယ် အငဲက “အသက်ကြီးကြီး ဆံပင်၇ှည်ရှည်နဲ့ အဖိုးကြီးကိုပဲ အော်နေကျပါလား “လို့ပြောသွားတဲ့ အထိပါပဲ ။ နောက်တော့ အားလုံး စောင့်စားနေတဲ့ ကိုလေးဖြူကအလှည့်ပေါ့ ကိုလေးက “တွေ့တွေ့ချင်း မတွေ့ရတာကြာပြီနော်တဲ့ ဒီလောက်မိုးကြီးလေကြီး ကြားရက်ထဲမှာတောင်လာတယ်ပေါ့”
ကိုလေးဖြူကလဲ ပရိသတ်ကို သူ့သီချင်းတွေဖမ်းစားပြီး အားရပါးရ ဖျော်ဖြေခဲ့တာပေါ့် ကိုလေးဖြူပြီးတော့ ပထမပိုင်းအစီစဉ်ပြီးပါတယ် ။.
ပြီးတော့ ဒုတိယပိုင်းကို ချက်ချင်းပဲပြန်စတယ် နားတောင်မနားခဲ့ပါဘူး ။ IC show ကတော့ သူရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ပရိသတ်ကို လုံးဝမညာဘူး စမယ်ဆိုတဲ့ အချိန်စတယ် နောက်တစ်ခြားပွဲတွေလို လူပိုသွင်းတာလဲ မရှိ ကြောငြာထားတဲ့ အဆိုတော်တွနဲ့ပဲ အပြည့်အဝဆိုတယ် နောက်ပရိတ်သတ်ကို မိုက်ထိုးပေးပြီး မိုက်မခိုးဘူး တကယ့်ကို အားပါးတရကိုဖျော်ဖြေခခဲ့တာပါပဲ
ဒုတိယပိုင်းအစီစဉ်မှာဆို အငဲ ၊မျိုးကြီး ၊လေးဖြူ (3) ယောက်လုံးက အောက်တောင်မဆင်းတော့ပဲ အလှည့်ကျကို ဖျော်ဖြေခဲ့တာတကယ့်ကို အားရစရာပါပဲ ။ ပတ်ကားရှင်းသိးတဲ့သူကတီး drum တီးတဲ့သူကတီးနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ဝယ်ထားရတဲ့ လက်မှတ်ဖိုးနဲ့တန်အောင် တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ဆုံး ပွဲကမပြီးတော့လို့ မပြီးသေးဘူးလားလို့ပြောရတဲ့ အထိကို အားပါးတရကိုဖျော်ဖြေခဲ့တာ ပရိသတ်နဲ့ IC က တစ်သားထဲကိုဖြစ်လို့ပေါ့ .
သား လည်း အိုင်စီ ဆို အရမ်းခိုက်သူ တစ်ဦး ရယ်ပါ ။ အကြိုက်ချင်း တော့ တူနေပြီ နော် မနွယ် ။ ဟီဟိ
အခွေထွက် မထွက်တော့ မပြောတက်ပါဘူး အဲ့နေ့က လူအရမ်းများလို့ စင်အရှေ့ထိရောက်အောင် မတိုးဖြစ်ခဲ့တော့ ရိုက်ကူးရေးရှိမရှိ မကြည့်ခဲ့ရဘူး pan pan ရေ
IC ကနယ်ပွဲတွေမှာလဲ အဲလိုပဲဖြေဖျော်ပါတယ် အားပါးတရပေါ့
အခု တင်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံ အရ ဆိုရင် နွယ်ပင်လည်း Standing ပေါ့.. အဲလို ကြည့်ရတာ မိုက်တယ်။ ခြေထောက်တော့ နည်းနည်း ညောင်းတာပေါ့။ ဒါနဲ ဘယ်ဘက်နား က ကြည့်တာလဲ . . မတွေ့လိုက်လို့ .. :D
ဟုတ်ပ Standing ပါပဲ တကယ့် တစ်ညောင်းပါပဲ အလည်နားလောက်ကပေါ့
ကျွန်မလည်း ဘယ်ဘက် အလည် နားလောက်မှာ.. မြင်မှ မမြင်ဖူးတာ တွေရင် သိပါ့မလား နော်.. ဟိဟိ:D
ဘယ်မှာလုပ်တဲ့ပွဲလဲ မသိလိုက်ရဘူး … IC တော့ကြိုက်တယ်…
နောက်ဆုံးကြည့်ခဲ့တဲ့ ပွဲက မတန်ဆုံးပဲ …သုဝဏ္ဏမှာလုပ်တဲ့ပွဲတုန်းက လက်မှတ်တစောင် နှစ်သောင်းနဲ့ ၀ယ်ပြီးကြည့်ရင်း ဘာစားမိသလဲမသိဘူး ဗိုက်က ဒုက္ခပေးလို့ … အပြင်မှာပဲ ထွက်ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေခဲ့ရတယ်… ။ သူများတွေက ပျော်လို့ …ကိုယ်ကတော့ အစားသရမ်းတဲ့ဒဏ်နဲ့ … အသံလေးပဲ အိမ်သာထဲက နားစွင့်ခဲ့ရတော့တယ် …
သုဝဏ္ဏမှာပဲ လုပ်တာပါ etone ရေ လက်မှတ်ကလဲ တန်မှတန် 6000 ၊ 8000 ပါတဲ့
အချိန်ကလဲ အလုပ်ချိန်လွတ် 73း0 မှစတာ 12း00 နာရီလောက်မှပြီးတယ်
အိုင်စီ ဆိုရင် အရမ်းကြိုက်ပါတယ်
နောက်ထပ် ရန်ကုန်မှာ ပွဲ ရှိတယ်ဆိုရင် လက်တို့ လိုက်ပါအုန်း
ဘာမှလည်းမမြင်ရဘူး။ ဘာလဲ လက်မှတ်ဖိုး မပေးလို့ မြင်ရအောင် မပြတာလား… ညီမလေး
မဆိုးပါဘူး။ သွားကြည့်ဖို့အချိန်နဲ့ငွေရှိနေတော့လည်း အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။
ဒီတစ်ခါ ရန်ဖြစ်တဲ့ပွဲ မမြင်ရဘူးလား…
ic ကတော့အတီးရောအဆိုပါကောင်းတော့ကြည့်ရတဲ့သူတွေအတွက်တန်ပါတယ်။bass guitar သမားက
လူသစ်လား? လူဟောင်းပဲလား? တစ်ခုရှိတာက ic ရဲ့သီချင်းတွေနဲ့အတီးstyleတွေဟာ နဲနဲရိုးလာပြီး
အရင်လောက် feel မရှိတော့ဘူးဖြစ်လာတယ်။လင်းလင်းတစ်ယောက်ကတော့ic ပရိတ်သတ်အတွက်
IC ချစ်သူများအတွက် ၁၃.၁၁.၁၁ လာမည့် တနင်္ဂနွေ သုဝဏကွင်းမှာ ရှိုးပွဲ ရှိကြောင်းပါ။